Yakachipa SNCB Chitima Tiketi Uye Mitengo Yekufamba | Save A Train
Yakachipa SNCB Chitima Tiketi Uye Mitengo Yekufamba
musha > Yakachipa SNCB Chitima Tiketi Uye Mitengo Yekufamba
Pano unogona kuwana ruzivo rwese nezve Akachipa SNCB matikiti ezvitima uye SNCB mitengo yekufambisa uye zvakwakanakira.
Topics: 1. SNCB neTrain Highlights
2. Nezve SNCB 3. Wepamusoro Insights Kuti Utenge Yakachipa SNCB Chitima Tiketi
4. Yakawanda sei SNCB matikiti anodhura 5. Nei zvirinani kutora SNCB zvitima, uye kwete kufamba nendege
6. Ndeupi musiyano uripo pakati pekirasi yekutanga neyechipiri? 7. Pane here kunyoreswa kweSNCB
8. Inguva yakareba sei SNCB isati yasvika kusvika 9. Ndeipi iyo SNCB chitima nguva
10. Ndeapi masitesheni anopihwa neSNCB 11. SNCB MIBVUNZO
SNCB neTrain Highlights
Iyo yenyika chitima kambani, SNCB, inoshumira 244 mamirioni vafambi pagore.
Mazuva ese, iyo yenyika chitima kambani inotora 61 zviuru zvevanhu mukati meBelgium uye kwavanoenda kuEurope.
Kambani yenyika yezvitima ndiyo huru yeBelgium yekufambisa sevhisi munyika.
Iyo National Chitima njanji kambani yeBelgium, SNCB, yakagadzwa mu 1926.
SNCB inopa njanji mabasa mukati meBelgium uye neEuropean. Tiketi chaipo, you can visit all the best nzvimbo dzekuzorora muEurope. Nemhando dzakasiyana dzematikiti uye makadhi kunyoreswa, SNCB inopa kune zvese zvinodikanwa.
Zvitima zvinowanzoitika kuBrussels – rinonzi Ghent, Antwerp – kushandiswa, kweBrussels – Namur. Iwe unogona zvakare kusvika kune dzakavakidzana nyika mukati meEurope uchishandisa SNCB zvitima.
Kupfuura mubatanidzwa, padhuze ne 20,000 Vashandi vanoshanda panjanji uye pamabhazi network vanoona kuti vafambi vanosvika zvakanaka kwavari kuenda zuva nezuva.
Enda ku Sevha Iyo Chitima Yeji kana kushandisa iyi yejeti kutsvaga anodzidzisa matikiti eSNCB
– Sevha Chitima iPhone iOS App
Wepamusoro Insights Kuti Utenge Yakachipa SNCB Chitima Tiketi
nhamba 1: Raira matikiti ako eSNCB pachine nguva pamberi paunogona
Mutengo we SNCB train tickets inomuka sezvo zuva rekufamba rinoswedera. Unogona kuzvichengetera imwe mari nekubhuka yako SNCB matikiti ezvitima kure nekukwanisika kubva pazuva rekuenda. SNCB chitima matikiti anowanikwa kare kare 3 kuti 6 mwedzi pamberi pekubva muchitima. Kugadzirira kwekutanga kunovimbisa kuti iwe unowana yakanyanya-isingadhuri SNCB chitima matikiti. Ivo zvakare vakadzikira muhuwandu, saka kukurumidza iwe kuodha, zvakachipa kwauri. Kuchengetedza mari paSNCB chitima matikiti, tenga matikiti ako ASAP.
nhamba 2: Kufamba neSNCB panguva yekusiya-yepamusoro nguva
SNCB matikiti ezvitima akadhura panguva dzekunze-pamusoro pe nguva, pakutanga kwesvondo, uye panguva dzemasikati. Iwe unogona kuve nechokwadi chekuwana isingadhuri chitima matikiti mukati mevhiki. Musi weChipiri, Chitatu, neChina, SNCB chitima matikiti ndiwo akanyanya mari. Nekuda kwehuwandu hwevashandi vebhizinesi vafambi vanoenda kubasa mangwanani nemanheru, matikiti ezvitima anodhura zvakanyanya mumaawa iwayo. Zviri zvakachipa kwazvo kufamba chero nguva pakati pemangwanani uye kusati kwaenda manheru. Kupera kwevhiki ndiyo imwe nguva yepamusoro yezvitima, kunyanya neChishanu uye Mugovera. SNCB chitima tikiti mitengo inowedzerawo pa zororo revanhu uye zororo rechikoro.
nhamba 3: Odha matikiti ako eSNCB kana iwe uine chokwadi nezve yako yekufamba nguva
SNCB zvitima vari kudiwa zvakanyanya, uye nemakwikwi mashoma, ivo parizvino vanoramba vari sarudzo yepamusoro yezvitima muBelgium. SNCB inokwanisa kumisikidza zvirango zvetiketi senge iyo yavanayo inorambidza kuchinjanisa tikiti kana kudzorera kunze kwekunge iri bhizinesi reti tikiti. Kunyangwe paine mamwe mawebhusaiti eforum kwaunogona kutengesa matikiti ako ruoko rwechipiri kuvanhu, SNCB haibvumire kutengeswa kwetikiti-kechipiri. Izvi zvinokubatsira sei kuchengetedza mari? Ronga tikiti rako chete kana uine chokwadi nezvechirongwa chako chinogona kukuchengetedza kubva kubhuku rimwe chete tikiti nekuti chimwe chinhu chakauya uye haugone kushandisa litikiti rekare.
nhamba 4: Tenga matikiti ako eSNCB paSave A Train
Sevha Chitima chine chikuru, zvakanakisa, uye zvakachipa zvinodhura matikiti ezvitima muEurope. Hukama hwedu nevazhinji vanoita njanji, masitiketi echitima, uye ruzivo rwedu rwehunyanzvi algorithms dzinopa Sevha A Chitima kuwana kune yakachipa pashiri yechitima matikiti. Isu hatisi kungopa zvakachipa zvitima zvechitima zveSNCB chete; isu tinopa zvakafanana kune dzimwe nzira dzeSNCB uye tinozvirumbidza nebasa rakanakisa revatengi mumusika wezvitima.
Yakawanda sei SNCB matikiti anodhura?
SNCB matikiti anotanga kubva ku € 2,5 kusvika pakukwira se20 Euro yerwendo rwechitima chimwe. The mutengo weSNCB chitima tikiti zvinoenderana nerudzi rwetiketi raunotenga uye paunosarudza kufamba:
Chekutanga Kirasi € 10.50 – € 20 € 21 – € 46
Nei zvirinani kutora SNCB zvitima, uye kwete kufamba nendege
1) Unosvika kuCity Center. Iyi ndiyo imwe mukana weSNCB zvitima kana ichienzaniswa nendege. SNCB inodzidzisa uye zvimwe zvese kufamba kwechitima kubva chero kupi mu guta kusvika pakati yeguta rinotevera. Izvo zvinokuchengetedza iwe nguva uye mutengo wekeji kubva kuairport kuenda kuguta. Nezitima zvinomira, zviri nyore kuti uende chero kupi zvako muguta rauri kuenda. Hazvina basa kuti uri kubva kupi uchibva, kweBrussels, Antwerp, kushandiswa, kana Liege, Kumisikidzwa kweguta ndiko mukana wakakura weSNCB zvitima!
2) Kufamba nendege kunoda kuti iwe uve panhandare yemaawa anoverengeka nguva yako isati yasimuka. Iwe unofanirwa kuenda nekuongororwa kwekuchengetedza usati watenderwa kukwira ndege. Ndiine SNCB zvitima, iwe unofanirwa kunge uri pachiteshi zvishoma pane 30 maminitsi pamberi. Kana iwe ukafungawo nezvenguva iyo zvinotora iwe kuenda kubva kuairport kusvika pakati peguta, iwe unozoona kuti SNCB zvitima zviri nani maererano ne yakazara nguva yekufamba.
3) Pamusoro, mutengo weSNCB matikiti ezvitima unoratidzika kunge unodhura kupfuura bhajeti matikiti emhepo. zvisinei, kana uchienzanisa zvese zvinopomerwa zvinosanganisira, SNCB chitima matikiti ane nani mutengo mutengo. Nezvimwe mutengo semabhadharo echikwereti aunofanirwa kubhadhara kuzvitima, kufamba neSNCB ndeyechokwadi chakanakisa.
4) Zvitima zvinowedzera eco-zvine hushamwari kana uchienzanisa pakati pezvitima nendege, zvitima zvaibuda pamusoro. Ndege dzinosvibisa mhepo nemhepo yakadzika kwazvo. Zvitima mukuenzanisa zvinopa zvakawanda kusvibiswa kwekabhoni kushoma pane ndege.
Ndeupi musiyano uripo pakati pekirasi yekutanga neyechipiri?
Kune makirasi akasiyana eSNCB matikiti emabhadharo akasiyana uye mhando dzevafambi. Unogona kutenga yakajairwa tikiti ye1st kana yechipiri kirasi. Semuyenzaniso, iyo yechipiri kirasi inoenderana zviri nani pakufamba kwenguva refu uye bhajeti vafambi. Asi kana iwe uchitsvaga nzvimbo yekutambanudza makumbo kana iwe uri mufambi webhizinesi uye unoda kushanda paunenge uchifamba, ipapo 1st kirasi yakakunakira iwe.
Pane here kunyoreswa kweSNCB?
Kune vagari veBelgium, kune mhando dzakasiyana dzekunyorera, iyo Unlimited Mwaka tikiti, uye Mwaka Wakajairwa. Kune veInternationals tinokurudzira kutenga nguva yakareba pamberi uye ipapo uchave neyakachipa sarudzo.
Makadhi ese ari maviri anogona kutengwa pa:
– SNCB tikiti makaunda.
Yakawanda SNCB Tiketi:
Tikiti yakajairwa ndiyo yakanyanya kuchinjika tikiti rechitima iyo SNCB inopa. saka, iwe unogona kufamba chero kupi muBelgium neyakajairwa tikiti tikiti. Iwe unofanirwa kucherechedza kuti Standard matikiti akatengwa online, haigone kudzoserwa. zvisinei, kana paine shanduko muzvirongwa, unogona kudzorera kana kuchinjanisa tikiti pane ekuverenga matikiti. Pamusoro pe, sevhisi iripo, zuva risati rasvika zuva rako rekuenda, kana ye 30 maminetsi mushure mekunge watenga tikiti.
Tikiti Yakakura Yemhuri
Nhengo dzese dzemhuri dzinogona kunakidzwa nezvikwereti zvakakura pamatikiti eSNCB. Semuyenzaniso, vana pasi 12 famba wakasununguka, uye kusvika 50% pamatiketi akajairwa evakuru nevana pamusoro 12. Uyezve, netikiti iri, unogona kufamba pazvitima zvese zveSNCB.
Kadhi iri rinoshanda pamwe chete nekadhi chiratidzo chitupa, izvo zvinofanirwa kusanganisira zera remuridzi.
Tiketi Yakatarwa Mwaka
Vagari veBelgian vanogona kutenga Standard Mwaka Tiketi, uye unakidzwe nenzendo dzisingagumi munzira imwechete. Nemamwe mashoko, nemutengo we 10 mwedzi kunyorera, ivo vanokwanisa kufamba mumativi ese maviri kakawanda sezvavanoda.
Tiketi yevhiki yekupedzisira inoshanda Chishanu-Svondo, aine 50% dhisikaundi pane chero kwaunosvika muBelgium. saka, kutanga pa 7 pm neChishanu, unogona kuenda chero kupi kuyambuka Belgium, mukirasi yekutanga kana yechipiri. Pamusoro pe, aya akakosha mazwi anowedzera kune iyo zororo reruzhinji naizvo.
Brussels kuenda kuGhent Chitima Mitengo
Antwerp kuGhent Chitima Mitengo
Halle kuGhent Chitima Mitengo
Bruges kuGhent Chitima Mitengo
Inguva yakareba sei SNCB isati yasvika kusvika?
Izvo zvakaoma kunyatsoita chaizvo, asi Save A Train anokurudzira kuti iwe kusvika pamusoro 30 maminitsi nguva yako yekuenda isati yasvika. Nenguva ino, iwe zvakare uchave nenguva yakakwana yekutenga zvinhu zvaunoda ita wako chitima rwendo kugadzikana sezvinobvira.
Ndeipi iyo SNCB chitima nguva?
Iwe unogona kuziva mune chaiyo-nguva pane yedu peji rembudzi pa Save A Train iyo SNCB Chitima nguva, Ingo nyora munzvimbo yako ikozvino uye kwaunoda kuenda, uye isu tinokuratidza ruzivo.
Brussels kuenda kuLiege Chitima Mitengo
Ndeapi masitesheni anopihwa neSNCB?
Chiteshi cheBrussels cheSNCB iBrussels – nechepakati, iyo iri mumoyo weBelgium.
Imwe nzvimbo yepamusoro yeSNCB chiteshi chiri muAntwerp, SNCB zvitima ibva uye usvike kubva kuAntwerp Central Station, padyo nehotera yakanaka yeBlue Astrid. Antwerp Central ndiyo chechipiri chiteshi chechitima chakabatikana muBelgium.
SNCB zvitima zvinobva kuGhent kubva ku Ghent Mutsvene Pieters chiteshi, which is the third-largest city in Belgium and the largest in Flanders.
Liege, Liege Guillemins ndiyo SNCB yepakati chiteshi chechitima. saka, Liege chiteshi chechitima chinobatanidza Belgium nenyika dzakavakidzana, making it one of the busiest train stations in Wallonia. Uyezve, kana uri kuronga kuenda kuGerman, Furanzi, Rukuzemubhogu, kana iyo Netherlands kubva kuBelgium, zviri nani kuchengetera yako SNCB chitima matikiti zvisati zvaitika.
kushandiswa (Brugge – Iri zita reguta mune mumwe mutauro unozivikanwa) chiteshi chechitima ndechimwe chakabatikana SNCB chiteshi chechitima muFlanders. Semuyenzaniso, kubva kuBruges, unogona kuraira yako tikiti tikiti kune mamwe dzakakurumbira dzakasiyana muBelgium: rinonzi Ghent, Antwerp, and Brussels in less than an hour. The Bruges train station is at a 20 maminitsi’ kufamba chinhambwe kubva ku pakati peguta, uye yakanaka Guta Rekare Markt square.
SNCB chiteshi chechitima muLeuven ndicho chiteshi chikuru chechitima muFlemish Brabant mudunhu muBelgium. Ichi chiteshi chechitima chakabatikana chinobatanidza iyo Flemish dunhu nedzimwe matunhu uye ndeimwe yepamusoro 5 Zviteshi zvechitima zvakabatikana muBelgium. saka, unogona chitima kufamba kuna kweBrussels, Brussels nhandare, Leuven, Antwerp, uye kunyanya chero guta muBelgium.
Mechelen kana Malinas, muguta reMechelen, iriwo imwe yenhepfenyuro dzeSNCB dzechitima muBelgium. Uchawana pano 10 mapuratifomu, kushandira Intercity chitima mitsara, kusanganisira Brussels Airport kubva kuAntwerp. Pamusoro pe, unogona kutenga matikiti ako eSNCB kuenda kuAmsterdam, uye Luxembourg, kuburikidza neAntwerp neBrussels.
Vari Bikes Inobvumidzwa PaBhodhi iyo SNCB Zvitima?
Mabhasikoro anotenderwa pazvitima zveSNCB. Kana iwe uine folda bhasikoro, ipapo unogona kukwira kuchitima, pasina muripo. zvisinei, mamwe marudzi emabhasikoro anokubhadhara iwe € 4 yekuwedzera kune yako tikiti tikiti.
Do Vana Vanofamba Mahara paSNCB Zvitima?
Ehe, asi kungosvika kune rimwe zera. Vana vari vadiki pane zera re 12 ndichafamba mahara kana uchiperekedzwa nemunhu mukuru anofamba.
Ndezvipfuwo Zvinotenderwa paSNCB Zvitima?
Ehe, unogona kuunza chipfuwo chako muchitima, kwe € 3 parwendo. zvisinei, chipfuwo chinofanira kunge chiri pamberi kana muhombodo, kana tswanda.
Ndeapi ma boarding maitiro eSNCB?
Yakawanda Inokumbirwa SNCB FAQ – Ndinofanira here kuronga chigaro pamberi paSNCB?
iwe kugona chengetedza munhu ndinozivapa kufanoita on domestic SNCB nezvitima. iwe chido get a personal chigaro mushure mekugadzirisa, asi izvi hazvisi zvekufanirwa.
Iko kune internet yeWi-Fi mukati meSNCB?
Aihwa. Hapana Free Wi-Fi internet pane SNCB zvitima. Unogona kunakirwa yemahara Wi-Fi muzvitima zveSNCB.
Kana iwe wakaverenga kusvika panguva ino, iwe ikozvino unoziva zvese zvaunoda kuti uzive nezve SNCB yako zvitima uye vakagadzirira kutenga yako SNCB chitima tikiti pa Save A Train.
Iwe unoda here kubatidza peji ino kune yako saiti? Click pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-sncb%2F%3Flang%3Dsn- (Mupumburu pasi kuona Embed Code), Kana kuti unogona kungobatanidza zvakananga kune ino peji.
Kana uchida kuva nomutsa vanoshandisa dzenyu, unogona kuvatungamirira zvakananga kunyika yedu mapeji kutsvaka. In batanidzo ichi, muchawana yedu rinofarirwa kupfuura chitima pakutengeserana – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside uine Links edu Chirungu kumhara mapeji, asi isuwo tine https://www.saveatrain.com/fr_routes_sitemap.xml uye iwe unogona kushandura iyo / fr kuita / nl kana / es uye mimwe mitauro.